न्याय मुर्तिको गल्ती ढाकछोप गर्न अवहेलनाको हतियार उठाउन पाइँदैन : त्रिपाठी ( अन्तर्वार्ता)
‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्तो आदेश पहिलो पटक’
प्रकाशित मिति : २०७४ पौष २५ मंगलबार , १४,८९८ पटक हेरिएको
न्यायालय र न्यायाधीश चर्चामा आउन थालेका छन् । गोविन्द केसी पक्राउ आदेशभन्दा अगाडि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लागेका बेला न्यायालय चर्चामा आएको थियो । अहिले सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादनमाथि छानविनको माग गरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार भएको मुलुकमा के न्यायाधीश वा न्यायालयबारे प्रश्न उठाउनै पाइँदैन ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के हो ? नेपालमा न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था कसरी आयो ? हामीले यिनै जिज्ञासा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई राखेका छौँ :
० डा. केसीको पक्राउलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– अदालत यो हदसम्म जानु हुँदैन थियो । एकजना नागरिकले अभिव्यक्ति दियो भन्दैमा त्यही अभिव्यक्तिकै कारणले व्यापार गरिनु हुँदैन । हामी लोकतान्त्रिक खुला समाजमा छौं । न्यायलय पनि एउटा सार्वजनिक संस्था हो । न्यायलय आलोचनाभन्दा पर छैन । न्यायलयबारे प्रशस्त टिकाटिप्पणी हुनसक्छ, छलफल हुनसक्छ । फैसलाबारे अवधारणा राख्न सकिन्छ । बहसलाई प्रतिबन्धित गर्न मिल्दैन । अदालत पनि करदाताबाट चलेको संस्था हो । त्यसकारण यो जवाफदेही हुनुपर्छ ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कस्तो विषयमा मान हानी हुन्छ हुँदैन भन्ने बारेमा बोलेको छ । एकजना टे«ड युनियन नेताले अदालतको फैसला अमेरिकी पूँजीपतिको पक्षमा छ, मजदुरको पक्षमा छैन भनेका थिए । उनले यो फैसलाविरुद्ध हामी हडताल गर्छौ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यो अभिव्यक्ति दिएको कारणले उनलाई मुद्दा चलाइयो । क्यालिफोनिया अदालतले उनलाई सजायको व्यवस्था गर्‍यो । मुद्दा फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो, सर्वोच्चको फैसला गलत छ भन्ने कुरा उनले बोले, कसैले गलत भन्दैमा गलत हुने होइन, तर नागरिकको मुख थुन्न मिल्दैन । शान्तिपूर्ण हडताल गर्न पाउने नागरिकको अधिकार नै हो । हडताल गर्दा नोक्सानी भयो भने त्यसको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेले हेर्लान् । मुद्दामा भनिएको छ, अदालत आलोचनाबाट डराउनु हुँदैन ।
यदि सिंगमर्मरको मूर्त छ, त्यसमा जति जोडर वर्षात भए पनि त्यो मूर्तमा भएको धुलो सफा भएर आउँछ । यदि कागजको नक्कली मूर्ति रहेछ भने थोरै पानी पर्ने्वित्तिकै नष्ट भएर जान्छ । अदालत भनेको सिंगमर्मरको मूर्तिजस्तै हो । यसको आफ्नो गरिमा र महत्व छ । लोकतन्त्र भनेको विचारहरुको बजार हो । विचारहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले अनावश्यक लान्छना लगायो भने, त्यसलाई भोलि जनताका धारणाले सच्चाउँछ । आत्तिएर डराएर पक्राउपूर्जी जारी गर्नु लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतका लागि सुहाउने कुरा होइन । बेलायतमा अदालतको मान हानीसम्बन्धी बुँदा नै हटाइयो । आलोचना भनेको छलफल बहस हो, नागरिकले आफ्ना कुराहरु राख्छन, त्यसमा अदालत डराउनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन ।
जस्टिस फ्र्याङ्क फर्टर भन्ने अमेरिकाको उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् । उनले भने की अदालत त एउटा लोकतान्त्रिक संस्था हो । पब्लिक इन्टिच्यूसन हो । यो आलोचना भन्दा भाथि हुन सक्दैन ।
आलोचना हुन्छ हुन देउ । खाली कुरा के हो भने, अदालतको आदेश नैकार्यान्वयन हुन नदिने, भौतिक आक्रमण गर्ने, त्यस्तो खालको क्रियाकलाप स्वीकार योग्य हुँदैन । बोली र शब्दले आफ्नो विचार राख्दैमा अपराध लाग्दैन । डा. केसीले भने कि छानविन हुनु पर्छ । छानविनको माग गर्नु कुनै गैरकानुनी कुरा हो र ? छाननिको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । न्याय परिषद छ । त्यहाँ उजुरी हाल्न सकिन्छ । उजुरी हाल्न लाग्यो भन्लैमा गिरफ्तार गर्ने ? यसले अफ्ठयारो ल्याउँछ । यो हदसम्म अदालत जानु हुँदैन थियो ।
० डा. केसीलाई अवहेलनाको मुद्दा लाग्यो, कारबाही हुन्छ ?
–कारबाही हुन्छ भन्दा पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्यो । अदालतमा बहस हुन्छ । केसीका वकिलहरु हुन्छन् । उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षा हुन पाउँछ । बयान हुन्छ । अहिले नै सजाय भइहाल्यो भन्ने कुरा होइन ।
० प्रहरी केसीलाई पक्राउ गर्न हठातरुपमा केसीको अनसन स्थलमा पुग्नुलाई कसरी लिने ?
–यो पनि बडो गजब छ । बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वोच्चले जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । तै पनि उनलाई पक्राउ गरिएको थिएन । अदालतले पटक–पटक भन्यो । यो राज्य कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । राज्य भनेको जहिले पनि पीडितहरुको हुन्छ । निमुखाहरुका लागि हुन्छ । यहाँ त राज्य नै पीडकहरुको लागि हुन थाल्यो । चार घण्टाभित्रमा केसीलाई पक्राउ गरिएको छ । यो आफैमा विडम्पनापूर्ण छँदैछ । वास्तममा नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्तो आदेश अहिले सम्म आएको छैन ।
० साँच्चै, यस्तो आदेश पहिलो पटक दिएको हो सर्वोच्चले ?
– हो, यो पहिलो पटक नै हो । अर्को कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने, अदालतको मर्यादा र रक्षा भनेको एउटा कुरा हो । अदालतको अवहेलनामा सजाय हुने हो । तर, त्यो एउटा न्यायाधीशको व्यक्तिगत रक्षाकवच होइन । त्यो कुनै न्यायाधीश बचाउने साधन होइन, अवहेलना । कुनै न्यायाधीशले खरावि गरेको छ भने त्यसलाई ढाकछोप गर्न अवहेलनाको हतियार उठाउन पाइँदैन । त्यसको फरक पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । संस्था र व्यक्तिबीचको फरक पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । समग्र न्यायपालिकाको मर्यादालाई कायम राख्नको लागि अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन नै हुन दिन्न भन्छ, दंगा गरेर अदालतमै न्यायाधीशलाई कुट्न खोज्छ, डिस्अर्डर सिर्जना गर्छ, भने मात्रै त्यो कुरा लागू हुन्छ । तर, एउटा न्यायाधीशले गरेको फैसला गलत हुन सक्छ । त्यसमा छानविन पनि हुनसक्छ । छानविनको माग पनि गर्न पाइन्छ । मानहानीको हतियारले त्यसलाई मार्न पाइँदैन । हाम्रो न्यायलयको न्याय सम्पादनको क्षमतामा ह्रास आएको देखियो । यो जुन आदेश आयो हाम्रो अदालतको न्यायसम्पादनको क्षमता कमजोर भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात गरिएको देखिएन ।
० अदालतविरुद्ध बोल्न पाइँदैन हो ?
–लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । नेपालमा लोकतन्त्र होइन नेतातन्त्र हावी भयो । माफियातन्त्र हावी भयो । लोकतन्त्र होइन धनतन्त्र हावी भयो । यस्ता सबै प्रश्नहरुमा बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ । बोल्न पाइन्छ । बोल्नु पनि पर्छ । अदालतकोबारेमा आफ्ना धारणा राख्न पाउँछ । केही कमजोरीहरु भएका छन् भने त्यसबारे प्रश्न उठाउन पाइन्छ । संविधानले पनि त्यस्ता संरचना तोकिदिएको छ । उजुरी दिन पाइन्छ । अदालत भनेको होलीकाउ होइन । यो आलोचना भन्दा पर, अलोकतान्त्रिक संस्था होइन नि ! एउटा कुरा लोकतान्त्रिक समाजमा के बुझ्न आवश्यक छ भने कुनै पनि संस्था जनताले तिरेको करबाट चल्छ भने, त्यो जनउत्तरदायी हुनै पर्छ । यो क्रिटिसिजम भन्दा मुक्त हुन सक्दैन । यसको छलफल भन्दा मुक्त हुन सक्दैन । कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्छन् । विचारहरु दिन पाइन्छ, ध्वस्त गर्न पाइँदैन । क्रिमिनल अक्ट्याक गर्न पाइँदैन । अन्य विकल्पहरुलाई प्रतिवन्ध गर्न मिल्दैन । विचारलाई प्रतिबन्धित गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्र भनेको विचारलाई प्रतिबन्धित गर्ने प्रणाली हो र ? संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको छ । अनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई निमिट्यान्न गर्न पाइन्छ ? त्यो त संवैधानिक अधिकारको रुपमा रहेको छ । संविधानका ति धाराहरुलाई निरुत्साहित गर्न मिल्छ ? निर्जीव तल्याउन मिल्छ ? त्यो अधिकार कसैलाई छ ? अदालतले संविधानका प्रावधानलाई प्राण दिने हो, वाणी प्रदान गर्ने हो, जीवन्तता प्रदान गर्ने हो । अदालतले विचार र अभिव्यक्तिबारे शंंकुचित भएर बस्न मिल्छ ? मिल्दैन ।
निजी मेडिकल कलेजले आईओएमलाई टेर्दैनन्, अनि लुट मच्चिदैन त ? (अन्तर्वार्ता)
‘निजी मेडिकल कलेज कालोबजारीया र ठग’
केसी फेरि अनसनमा, पराजुली छानविनमा तानिए
केसीले इजलासमै भने –‘म जेल बस्न तयार छु, न्याय दिने नै हो भने पराजुलीमाथि छानविन हुनुपर्छ’
कान्छा कोइरालाले बयान दिन्न भन्दा मानहानी लागेन, अहिले बुढो डाक्टर लखेट्ने : प्रा. केसी (अन्तर्वार्ता)
डा. केसी पक्राउ परेको शिक्षण अस्पतालमै मृत्युसँग लडिरहेका छन् हिम
'गोपाल पराजुलीले जानकी मेडिकल कलेजकाे फैसलामै चिकित्सा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु भयाे'
गोविन्द केसीका समर्थक हरेक दिन बालुवाटारमा !